Bøhler: Qaar kamid ah ajaaniibta waxay shaqada u diidaan sababo la xiriira diin iyo dhaqan. - NorSom News
Bøhler: Qaar kamid ah ajaaniibta waxay shaqada u diidaan sababo la xiriira diin iyo dhaqan.
Jan Bøhler oo ah xildhibaan kamid ah baarlamaanka Norwey, kana tirsan xisbiga AP ayaa sheegay in ajaaniibta qaarkeed, gaar ahaan haweenka ay shaqooyinka qaarkood u diidaan sababo la xiriira diin iyo dhaqan. Wuxuuna tusaale ahaan usoo qaatay dumarka ka yimid Soomaaliya , Iiran, Afgaanistaan iyo Pakistan oo heerkooda shaqo ay wax badan sadex jibaar ka hooseeyaan heerka shaqo ee dumarka ka yimid wadamada ay kamid tahay Srilanka. Bøhler ayaa sheegay inay jiraan dad ka danbeeyo dumarkan oo ku cadaadinayo inaysan qaadan shaqooyinka qaarkood oo ay NAV usoo bandhigto, sababtoo waxay ka hor imaanaysaa dhaqankooda iyo diintooda. Dhaqamada ay haystaan dumarkan waxaa jiro cadaadis ah in dumarka ay guryaha joogaan oo aysan qaadan shaqooyinka ay soo dhex galayaan wax la xiriira khamri, sida dukaamada, makhaayadaha iyo huteelada. Wuxuuna intaas ku daray in sababtan uu arintan usoo bandhigayo aysan aheyn inuu dhaleeceeyo ama wax ka sheego dumarkan, balse uu rabo in dhibtan wax laga qabto.
Hege Farnes Hildrum oo ah madaxa laanta NAV ee Oslo ayaa dhankeeda sheegtay inaysan xog badan ka haynin arintan ku saabsan in dumarka ajaanibta ah ay shaqo loo soo bandhigo diidaan, balse sababta ugu weyn ee kahor istaaga qowmiyadaha ajaaniibta ah qaark00d ay tahay, aqoon ama xirfad la aan darteed. Hadaad rabto inaad shaqo heshid waa inaad lahaataa aqoon ama xirfad uu qofka shaqo bixiyaha ah kugu qaadan karo. Si guud ayay u sheegtay in heerka shaqo la aanta ajaanibta ee Oslo ay gaarsiisantahay 7,0%, halka heerka shaqo la aanta dadka kalena ay tahay 2%. Hege ayaa qirtay inuu jiro farqi weyn oo u dhaxeeyo qowmiyadaha ajaanibta ah, marka laga hadlayo heerka shaqada. Waxayna intaas ku dartay in ay qaban-qaabiyaan koorsooyin iyo kulamo kale si kor loogu qaado heerka aqoonta ee qofka, si uu u lahaado xirfad ama aqoon uu suuqa shaqada uga qayb qaadan karo.
Bøhler ayaa sheegay inay si qarsoodi ah ula soo xiriireen dad ka shaqeeyo NAV oo u sheegay inay jiraan dadka 12 sano dhiganaya koorsooyin, oo markii mid ka dhamaataba mid kale sii aadaya, iyaga oo aan waligood shaqeyn. Dadka lasoo xiriiray ee ka shaqeeya NAV ayuu sheegay inay ku wareersanyihiin in markii ay shaqo usoo bandhigaan dadka qaarkiis ay diidaan sababo la xiriira diintooda ama dhaqankooda. Wuxuuna sheegay inay tahay in dowladu ay arintan wax ka qabato, isla markaana si cad loo qeexo qaabka shaqada wadanka. Isaga oo ka codsaday dowlada inay samayso hab qofka loo ciqaabi karo ama looga joojin karo lacagta kaalmada hadii uu shaqo u diido sababo la xiriira arintan.
Xogyahaya Sylvi Listhaug oo ayadna ka qaybgalaysay dooda ayaa sheegtay inay hadaba jiraan qaab loo ciqaabo qofka shaqo u diida diin ama dhaqan darteed. Iyada oo sheegtay in dadka shaqada u diida arintaas aysan badneyn tiro ahaan.
Previous articleBooliska Norwey oo maanta soo saaray sharci cusub oo meesha ka saaraya sheekadii muranka dhalisay ee (ukjent)
Next articleSylvi Listhaug: Ayaan Xirsi Ali waa qof aan ku daydo oo tusaale fiican ii ah